Translate Bosnian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Bosnian to Myanmar (Burmese), Bosnian to Myanmar (Burmese) translations, Bosnian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Zdravo, kako si မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ima li nekoga? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Toliko te volim ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Možete li mi zvati taksi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
zao mi je ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Zainteresovan sam ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Moj let je odložen အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ovde sam zbog posla ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Zdravo moje ime je မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Žao mi je, ali sam oženjen ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Želeo bih da vas pitam ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Možete li me odvesti na aerodrom? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Koje je trenutno vreme, molim vas? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Gde je najbliža policijska stanica? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Mogu li pozajmiti vaš telefon punjač molim? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Mozes li mi pomoci? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Koliko to košta? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ja sam alergičan na gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Zovite doktora ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Ima li doktora? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Zovi me šef, molim te. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ovo mesto je veoma lijepo ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Odvedi me u hotel, molim te ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Koji je broj moje sobe? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?